beesha Caalamka oo soo dhawaysay heshiiskii muqdishu lagu gaaray xalay | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG beesha Caalamka oo soo dhawaysay heshiiskii muqdishu lagu gaaray xalay
beesha Caalamka oo soo dhawaysay heshiiskii muqdishu lagu gaaray xalay
Qoraal kasoo baxay Beesha caalamka ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiska, waxaana ay ku tilmaamtay heshiiskaasi tallaabo dhanka wanaagsan loo qaaday, uun yahay mid u adeegaya danaha Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho iyo Soomaali oo dhan.
“Qaramada Midoobay waxay si diiran u soo dhawaynaysaa heshiiskii ay caawa ku dhawaaqeen Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, madaxda Galmudug, HirShabelle iyo Benaadir iyo sidoo kale Golaha Midowga Musharixiinta, waxayna bogaadinaysaa kuna tilmaamaysaa heshiiskaasi tallaabo dhanka wanaagsan loo qaaday, ayadoo ku tilmaamaysa mid u adeegaya danaha Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee kunool Muqdisho iyo Soomaali oo dhan” ayaa lagu yiri Qoraalka kasoo baxay saaxiibada Beesha Caalamka.
Sidoo kale Beesha caalamku waxaa ay sheegtay in ay ku dhiirra galinayso dhammaan ka qayb galayaasha wada hadaladan inay sii wadaan si ay u xalliyaan mawduucyada kale ee harsan si ay ku jirto isku tanaasul iyo niyad wanaag.
Heshiis ka kooban lix qodob ayaa xalay lagu gaaray magaalada Muqdisho iyadoo heshiiskaasina uu ahaa mid si weyn ay u soo dhoweeyeen bulshada Soomaaliyeed.
Previous articlepuntland oo ka hadashay heshiiski muqdishu lagu gaaray
Next articleFarmaajo oo amar ku joojiyay School ay burburin ku wadeen Ciidamada booliska Soomaaliya